Ngaba i-imeyile ifile? | Martech Zone
Ngaba i-imeyile ifile?
NgoLwesibini, Januwari 3, 2012 NgoLwesibini, Januwari 3, 2012 Douglas Karr
Xa ndifunda ibali lakutshanje malunga Iqela le-IT e-UK elalela i-imeyile, Kwafuneka ndiyeke kwaye ndicinge ngomsebenzi wam mihla le kwaye ingakanani i-imeyile endiphanga ngayo usuku olunemveliso. Ndibuze umbuzo kubafundi bethu ngeZoomerang poll kwaye bambalwa kakhulu abacinga ukuba i-imeyile iza kufa ngalo naliphi na ixesha kungekudala.
Ingxaki, ngokoluvo lwam, ayiyiyo i-imeyile. Xa i-imeyile isetyenziswe ngokufanelekileyo, iyasebenza ngokufanelekileyo. Ukuba nonxibelelwano olubhaliweyo, olufutshane, olucacisa iinjongo kunye neenkqubo ezenza kube lula ukuba abantu benze ngezo imeyile. Andiqondi ukuba inkampani yase-UK iyazinceda ngokunqanda inkqubo yonxibelelwano yesiqhelo eyamkelwe kwindalo iphela. Banokuseta ngokulula imigaqo yokuzibandakanya kwindlela abayiphatha ngayo i-imeyile yabo ngaphakathi.
Ingxaki yile SPAM kwaye inkqubo esithe ngayo rhuma ukuthumela i-imeyile. Kwiminyaka engama-20, asitshintshanga kwanto kwinkqubo yokubhaliswa kwe-imeyile. Ii-imeyile ezinkulu ziinkampani ezilungileyo qhubeka uvaliwe, Ngelixa Ugaxekile uyaqhubeka ukufumana i-imeyile. Impembelelo kwimveliso (kunye indawo) kuyamangalisa.
Kude kube i-ISP (uMboneleli weNkonzo ye-Intanethi) inyathela ngeendlela ezintsha, umba uya kuqhubeka. Ingcebiso yam iya kuba kukusetyenziswa kweGoogle ukuvelisa inkqubo yokubhalisa yemvume yokuthengisa kunye nokulawula ukungena kwiiseva zabo. Iinkampani ezinje ngezam zinokubhalisa iindawo zethu kunye ne-ISP kwaye zicime naluphi na unxibelelwano olungavumelekanga. Qho xa singena kwincwadana, ukungena kuya kubhalisa kwi-ISP… hayi i-ESP (uMboneleli weNkonzo ye-imeyile). I-ISP ayizukufuna enye into… banokuvimba yonke i-imeyile ngaphandle kopapasho oluvumelekileyo.
Infographic ngu EbonakalayoGains.
tags: imeyile efileemail MarketingUmboneleli wesevisi ye-imeyileIzibalo ze-imeyileespkwi-infographicI-imeyile ifileispimeyile engafunekiyo
Amashishini amancinci asebenzisa njani isoftware ukuLawula abafowunelwa
Uvavanyo lweSiza lukhokelela kuLonwabo lokuGuquka